DeltaFosB၊ Neuroplasticity နှင့်စွဲခြင်း - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
Neuroplasticity ဆိုသည်မှာ ဦး နှောက်အတွင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများ၊ သင်ယူခြင်း၊ နားမလည်ခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်သို့ ဦး တည်စေသည်။ စွဲတွင်အလွန်အစွမ်းထက်သောသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်တို့ပါဝင်ပြီး ဦး နှောက်တွင်သိသိသာသာပြောင်းလဲမှုရှိသည်။ ဤပြောင်းလဲမှုများတွင် DeltaFosb ကဲ့သို့သောဓာတုပစ္စည်းများနှင့် Synaptic strength ပြောင်းလဲမှုများပါဝင်သည်။ ဒါဟာတော်တော်လေးနည်းပညာပိုင်းနိုင်ပါတယ်။ neuroplasticity အပေါ်ကြီးစွာသောရှင်းပြချက်ကိုကြည့်ပါ ညစ်ညမ်းအပေါ်-Norman Doidge ။
အမူအကျင့်စွဲခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းတို့သည်တူညီသောယန္တရားများကိုမျှဝေခြင်းနှင့်ရလဒ်မှာအလားတူ ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်ရှိပြီးသားဇီဝကမ္မဆိုင်ရာယန္တရားများကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်လျော့ချခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။ Delta FosB မော်လီကျူးသည်စွဲလမ်းမှုအားလုံးအတွက်မော်လီကျူး switch တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကူးယူခြင်းအချက်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာမျိုးဗီဇများကိုပိတ်ထားသည်။ အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုသည်ကွဲပြားခြားနားသည်သို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှုသည်စွဲလမ်းမှုထက်ပြင်းထန်သောသိပ္ပံတွင်အခြေခံမရှိသော Pseudoscientific အငြင်းပွားမှုများ။ Delta FosB ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ on နှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုများကိုဤနေရာတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည် - မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ
ဤအခန်းတွင်အများပြည်သူအတွက်ဆောင်းပါးများနှင့်သုတေသနဆောင်းပါးများပါ ၀ င်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်စွဲလမ်းမှုကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ပါကဆောင်းပါးများနှင့်စတင်ရန်အကြံပြုလိုသည်မှာ၎င်းတို့ကို“ L” ဖြင့်မှတ်သားထားပါ။
DeltaFosB: ဆုကြေးများအတွက်တစ်ဦးကမော်လီကျူး Switch (2013)
(L) မြစ်ဝကျွန်းပေါ်-FosB ၏ဦးနှောက် Buildup စွဲစေတယ်
(L) စွဲသော ဦး နှောက် - Nestler နှင့် Malenka (၂၀၀၄)
(L) BDNF - မူးယစ်ဆေးမရှိဘဲ ဦး နှောက်၏စွဲပြောင်းလဲမှုကိုလှန်လှောကြည့်ခြင်း (၂၀၀၉)
ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင်တစ်ဦးက High-အဆီမြင့်မားသောသကြားဓာတ်စာလူမှုရေးမှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းခြင်းနှင့် medial prefrontal cortex (2019) တွင် atypical neuroplasticity နှင့် parvalbumin interneuron ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏ဝိသေသဓာတုအမှတ်အသားများပွောငျးလဲ
acute နှင့်ထပ်ခါတလဲလဲကင်းသည့် hypothalamus (2006) ၏ paraventricular နျူကလိယအတွက် FosB / DeltaFosB စကားရပ်မြားတှငျပွောငျးလဲ induces
မော်ဖင်းအကိုက်အရေးယူအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် DeltaFosB များအတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ (2006)
အကျိုးခံစားခွင့်စနစ်တွင် Anandamide နှင့် sucralose ပြောင်းလဲခြင်း osFosB စကားရပ် (၂၀၂၀)
ဖက်တမင်းဆေးပြား-သွေးဆောင်အပြုအမူအသိနှင့် Dorsal Striatum အတွက် Cdk5 / p35 လုပ်ဆောင်ချက် (2015) ၏ဖော်ပြမှုအကြားအစည်းအရုံး
ဖက်တမင်းဆေးပြားဖို့ Ventral Tegmental ဧရိယာကြာရှည်လူမှုရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive အတွက်ကျော်-Expression BDNF နှင့်ကြွက်များ၏ Mesocorticolimbic နေရာများအတွက်ΔFosBဖော်ပြမှုတိုးတက်စေနိုင်ခြင်း (2013)
အမျိုးသမီးသည်အထိ (2015) တွင်အစောပိုင်းဘဝကစိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံအားဖြင့်သွေးဆောင်သည့်အပြုအမူများနှင့်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောအခကျအခဲမြားကွုံရအပေါ် Highly အာခေါင်စားနပ်ရိက္ခာ၏အကျိုးရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှု
နျူကလိယနှင့်အတူဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်တွေ covaries အတွက်လှောင်အိမ်-သွေးဆောင်ကျပုံစံအပြုအမူ FosB / DeltaFosB စကားရပ် (2015) accumbens
Cam Kinases: အမှတ်တရများ မှစ. စွဲဖို့ (2015)
Cdk5 Dopamine D2 receptor နှင့် attenuation မြစ်အောက်ပိုင်း signal (2013) Phosphorylates
အဆိုပါ Fosb Gene မှာ cell-အမျိုးအစားအတိအကျဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်တည်းဖြတ်လူမှုရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှု (2017) မှဖြစ်ပေါ်နိုင်ထိန်းချုပ်မည်
Module Intermale ကျူးကျော်ခုနှစ်တွင်နျူကလိယ Accumbens အတွက် deltaFosB ၏ cell-Type-Specific အခန်းကဏ္ဍ (2018)
စွဲလမ်းများအတွက်မှတ်ဉာဏ်၏ cellular အခြေခံ (2013)
CREB နှင့် deltaFosB အတွက်အပြောင်းအလဲများ methylenedioxypyrovalerone (2016) ကသွေးဆောင်သည့်အမူအကျင့်ာင်းနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်
နာတာရှည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအီသနောအုပ်ချုပ်ရေး differential မြင့်အနိမ့်အရက် preference ကို (2019) နဲ့ကြွက်၏ cortical-limbic အဆောက်အဦများအတွက် DeltaFosB immunoreactivity ပွောငျးလဲ
ကွဲပြားအရက်သောက်ပုံစံများနှင့်အတူစပ်ကြွက်များ၏နှိုင်းယှဉ် (2012): မြင့်မားသောΔFosBအတွက်အရက်ရလဒ်များနာတာရှည် Self-အုပ်ချုပ်ရေး
နျူကလိယ accumbens အတွက် D1 နှင့် D2 dopamine အဲဒီ receptor ပါဝင်သောအလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက်ကင်း-သွေးဆောင် dendritic ကျောရိုးဖွဲ့စည်းခြင်း (2006)
Chimps, အာရုံကြော Fibers သီးခြားထားရန်အနှေးလူသားတွေဟာ (2012) နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်လျှင်
DeltaFosB differential နျူကလိယကိုတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း function ကို (2013) accumbens modulates
အဆိုပါ Kappa-opioid အဲဒီ receptor agonist U50488 (2012) ၏လိုလားသူစိတ်ကျရောဂါသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချနေစဉ်အတွင်း DeltaFosB ကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုကောင်းစေပါတယ်
ဦးနှောက်အကြိုးကိုဆားကစ်အတွက် DeltaFosB စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်လက္ခဏာတုံ့ပြန်မှုမှခံနိုင်ရည် mediates ။ (2010)
DeltaFosB သွယ်ဝိုက် Cck ကမကထလှုပ်ရှားမှု (2010) ထိန်းညှိ
DeltaFosB သော induction ထပ်ခါတလဲလဲΔ⁹-THC အုပ်ချုပ်ရေး (2014) အောက်ပါတစ်ဦးနှောက်ဒေသ-မှီခိုထုံးစံ၌CB₁အဲဒီ receptor desensitization နှင့်အတူပြောင်းပြန်ဆက်နွယ်နေပါသည်
Antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါးအားဖြင့်လူ့ Prefrontal Cortex အတွက် DeltaFosB induction အပျက်သဘောဆောင်သောအပြုအမူရလဒျ (2013) နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်
Striatal အလတ်စား Spiny အာရုံခံနာတာရှည် Pharmacological မှတုံ့ပြန်မှုအတွက် Subtype, စိတ်ခံစားမှုများနှင့် Optogenetic လှုံ့ဆော်မှု (2013) တွင် DeltaFosB induction
DeltaFosB မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole (2012) တွင်စိတ်ကြွဆေးသော်လည်းမလူမှုရေးအိုးအိမ်သို့မဟုတ်အထီးကျန်အားဖြင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်တိုးပွါး
DeltaFosB နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးထိတွေ့မှု (2008) ပြီးနောက်က c-fos ဗီဇ၏ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှု desensitization mediates
DeltaFosB: နျူကလိယအတွင်းရှိစိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်များအားမော်လီကျူးဂိတ်တစ်ခုလား။ (၂၀၀၆)
DeltaFosb: စွဲ & အခြေအနေ
(FACS) sorting ချောင်း-activated ဆဲလ်သုံးပြီးတစ်ခုတည်းကြွက် dorsal striatum ထံမှစိတ်ကြွဆေး-activated Fos-ဖော်ပြအာရုံခံ (2013) တွင်မော်လီကျူးကိုပြောင်းလဲ၏ detection
FosB ပရိုတိန်းနှင့်စွဲမှု၏ကို Select လုပ်ပါဦးနှောက်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်စီးပွားပျက်ကပ်လူနာများအတွက်အလားအလာပစ်မှတ် Gene ၏ differential Expression (2016)
fluoxetine နှင့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု (2015) ကဦးနှောက်ကိုတလျှောက်လုံး FosB isoforms ၏ differential သော induction
လမ်းကြောင်းအချက်ပြသည့် extracellular signal ကို-စညျးမဉျြးစညျးကမျး kinase (ERK) တွင်မူးယစ်ဆေးဝါး-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲ: အားဖြည့်ခြင်းနှင့် reinstatement များအတွက်သက်ရောက်မှု (2008)
မူးယစ်ဆေး-အတူတွဲ Contextual လှုံ့ဆော်မှုကို Select လုပ်ပါနျူကလိယ Accumbens အာရုံခံ (2016) တွင် Dendritic ကျောရိုး Dynamics ကိုတိုးပှား
အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်နီကိုတင်းထိတွေ့ကြွက်တွေမှာနောက်ပိုင်းတွင်-ဘဝကိုကင်းဆုလာဘ် (2016) အပေါ်သက်ရောက်မှု
မြင့်မားသောအဆီအစားအသောက်များတွင်ငယ်ဘဝထိတွေ့မှု (2009) (Deltafosb dopamine အချက်ပြမှုကိုလျော့နည်းစေ) အစားအသောက်ဦးစားပေးနှင့်ဗဟိုဆုလာဘ်အချက်ပြအတွက်ရေရှည်အပြောင်းအလဲများကိုအားပေးအားမြှောက်
နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် opioid နှင့် cannabinoid အဲဒီ receptor-mediated အချက်ပြအပေါ်ΔFosB overexpression ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (2011)
ကြွက်များတွင်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် anhedonia အပေါ် striatal ΔFosB overexpression နှင့် ketamine ၏ဆိုးကျိုးများ (2014)
Electroacupuncture ဆုကြေး-Related အတွက် FosB / ΔFosB Levels နဲ့ဦးနှောက်နေရာများ (2012) ၏လျှော့ချရေးသက်ဆိုင်သောအလွန်အကျွံအရက်စားသုံးမှုနည်းချင်နည်း
နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် Enkephalin downregulation နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် anhedonia (2014) အခြေခံ
ကြွယ်ဝပြည့်စုံပတ်ဝန်းကျင် (2014) နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး attenuates နှင့်ကြွက် prefrontal cortex နဲ့နျူကလိယ accumbens အတွက်ΔFosBစကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများ induces
ERK2: မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် plasticity များအတွက်ယုတ္တိနှင့်တံခါးဝအရေးပါ? (2006)
ကင်း-သွေးဆောင်ပလပ်စတစ်ထဲမှာ Histone Methyltransferase G9a ၏မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ (2010)
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်နီကိုတင်းအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်ΔFosBအတွက်အီသနော conditional နေရာဦးစားပေးမှုနှင့် ALTER တစ် Novell ပတ်ဝန်းကျင် (2014) မှအမြင့်သို့မဟုတ် Low အပြုအမူ reactivity ပြသည်အထိအတွက်ကွဲပြားခြားနားသော
Hippocampal DeltaFosB ၏အတွေ့အကြုံကိုမှီခို induction (2015) သင်ယူခြင်းထိန်းချုပ်မည်
လူကြီးအတွက်ကင်း၏ 3,4-methylenedioxypyrovalerone အဆိုပါ psychostimulant တိုးပွါး, ကြိုးများနှင့်အားဖြည့်သက်ရောက်မှုမှဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များ၏ထိတွေ့မှု (2017)
နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက် Exposure (2015) အပြီးသည်အထိအတွက်ထိခိုက်မခံတဲ့ဦးနှောက်နေရာများအတွက် expression နဲ့ NMDA receptor နှင့် FosB / ΔFosB၏ Colocalization
အလွဲသုံးမှုများစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်ΔFosBများ၏ N-Terminal နှင့်ဒိုမိန်း၏ functional အခန်းကဏ္ဍ (2014)
မြင့်မားသောစရိုက်များ Impulse အဆိုပါ Rat (2014) တွင်စားနပ်ရိက္ခာစွဲ-လိုပဲအပြုအမူခန့်မှန်း
Ifenprodil အဆိုပါ caudate putamen အတွက် (1) Ras-ERK2 / 2016 အဆငျ့ဆငျ့၏စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်အပြုအမူအာရုံခံစားမှုနှင့် activation များ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့်စကားရပ် attenuates
ချို့ယွင်းကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မျိုးသုဉ်း retention ကိုနှင့်အထီးကြွက်တစ်ဦးက high-အဆီ / High-သကြားဓာတ်စာကန့်သတ်ထားနေ့စဉ်ဝင်ရောက်ခွင့်အားဖြင့်သွေးဆောင်တိုးမြှင့်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူ: အစားအသောက်များတွင်-သွေးဆောင် prefrontal cortex dysregulation များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု (2016)
5 (2005) အချက်ပြကိုကင်း-mediated dopamine ၏ကို attenuation မှဦးဆောင် cyclin-မှီခို kinase ၏တိုးမြှင့်လှုပ်ရှားမှု
ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းတိုးလာ Impulse: အ orbitofrontal cortex (2009) တွင် DeltaFosB များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ
ဆားအစာစားချင်စိတ်များ induction နျူကလိယ accumbens အတွက် dendritic shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ပွောငျးလဲနှင့်စိတ်ကြွဆေး (2002) ကိုကြွက် sensitizes
မော်ဖင်းအကိုက်မှီခိုခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာ (2010) အတွင်းဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှု system ကို-related အဆောက်အဦများအတွက် FosB / DeltaFosB ၏ induction
Synaptic plasticity နှင့်စွဲလမ်းအတွက် striatal circuit ကို function ကို (2011) ပေါင်းစပ်
ရေရှည်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဆယ်ကျော်သက်အတွက်ΔFosB induces မဟုတ်ဘဲအရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် Wistar ကြွက် (2016)
Long-Term လေ့ကျင့်ခန်းဟာ dorso-ventral ဝင်ရိုးတန်း (2013) လျှောက် Hippocampus အတွက်ΔFosB induction များအတွက်အစွမ်းထက်အစပျိုး Is
စွဲ၏မော်လီကျူး neurobiology: အားလုံး DeltaFosB အကြောင်းကိုဘာလဲ (၂၀၁၄)
N-acetylcysteine ​​ကုသမှုလုပ်ကွက်ဟာအီသနော-သွေးဆောင်အပြုအမူအကဲဆတ်ခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆက်စပ် DeltaFosB ပွောငျးလဲ (2016)
N-acetylcysteine ​​ကုသမှုလုပ်ကွက်ဟာအီသနော-သွေးဆောင်အပြုအမူအကဲဆတ်ခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆက်စပ်ΔFosBပွောငျးလဲ (2016)
လေ့ကျင့်ခန်းဆုလာဘ်၏ Neurochemical နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းလေ့ကျင့်ခန်း Control (2016) ၏လွတ်လပ်သောများမှာ
Neurotrophic အချက်များနှင့်စွဲလမ်းမှုအတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပလပ်စတစ် (2009)
အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌ BDNF ၏ Overexpression ထပ်ခါတလဲလဲလူမှုရေးရှုံးနိမ့် (2016) ထိတွေ့ကြွက်များတွင်မူးရူးကင်းမိမိကိုယ်မိမိအုပ်ချုပ်ရေးတိုးမြှင့်
နျူကလိယအတွက် DeltaFosB ၏ Overexpression တူတဲ့ကာကွယ်စွဲ phenotype accumbens, ဒါပေမယ့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်၏မအကာအကွယ်စိတ်ကျရောဂါ phenotype (2014)
DeltaFosB ၏ Overexpression ကြွက်တွေမှာ saccharin စားသုံးမှု၏ attenuation ကင်းသွေးဆောင်ဖိနှိပ်မှုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ (2009)
Depression- နှင့် Cholecystokinin ကကမကထပြုခဲ့တော့ပူပန်-Related အပြုအမူများအတွက် Prefrontal cortical တိုက်နယ်: ΔFosB၏အခန်းက္ပ (2014)
ပရိုတိန်း Kinase, G ထပ်ခါတစ်လဲလဲကင်းအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် Dopamine ဖြန့်ချိ, ΔFosBဖော်ပြမှုနှင့် Locomotor Activity ကိုထိန်းညှိ: Dopamine D2 receptor (2013) ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု
PSMC5 တစ် 19S Proteasomal ATPase သည်နျူကလိယ Accumbens အတွက်ကင်းလှုပ်ရှားမှု (2015) ထိန်းညှိ
အာဟာရရှိသောအစားအစာများကိုကျပန်းရရှိခြင်းသည်အလားတူစွဲလမ်းမှုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်မှုများကိုသတ်မှတ်ထားသောအချိန်ဇယားအတိုင်းလှုံ့ဆော်ပေးသည်၊ သို့သော်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ဇယားတစ်ခုတည်းကသာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည် (၂၀၂၀)
သန့်စင်ပတ်ဝန်းကျင်အားဖြင့်ကိုကင်း-သွေးဆောင် locomotor သက်ရောက်မှုများလျှော့ချရေး striatal အတွက် DeltaFosB ၏ဆဲလ်-တိကျတဲ့စုဆောင်းခြင်းနှင့် cortical ငျဒသေ (2016) နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်
MDMA Self-အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာΔFosBစကားရပ်များတွင်ဒေသဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုဒေသအလိုက်ထုံမွှန်း MDMA (2019) ၏သက်ရောက်မှုမှတိုးမြှင့် sensitivity ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း
MDMA ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီးနောက်ကြွက် ဦး နှောက်တွင် osFosB စကားရပ်တွင်ဒေသဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများသည်ဒေသအလိုက်ကူးစက်သည့် MDMA (၂၀၂၀) ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပိုမိုထိရောက်စွာကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည်။
phosphorylation အားဖြင့် DeltaFosB တည်ငြိမ်မှု၏စည်းမျဉ်းဥပဒေ (2006)
CREB နှင့် DeltaFosB (2003) ကမျိုးဗီဇစကားရပ်များနှင့်ကင်းဆုလာဘ်၏စည်းမျဉ်း
စိတ်မူမမှန် (2017) တွင်ကွန်ယက်ချက်ချင်းအစောပိုင်း Gene ဖော်ပြမှုဆုချ
Striatal FosB / ΔFosB- ဖော်ပြ. အာရုံခံလျော့ချရေး L-Dopa-သွေးဆောင် Dyskinesia (2014) ၏ရွေးချယ် Inactivation
ဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်အစားအသောက်အဆီရန်စိတ်ခွန်အားနိုးတုံ့ပြန်မှု (2015) တွင်လိင်ကွဲပြားမှု
အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ: ဆယ်လူလာယန္တရားများနှင့် Functional အကျိုးဆက်များ (2006)
ရေရှည်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် medial prefrontal cortex နဲ့ striatum (2015) တွင်တည်ငြိမ်ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇစကားရပ်ပုံစံများ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်ဖက်တမင်းဆေးပြားမှစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် Locomotor အသိ, ဒါပေမယ့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သည်အထိအတွက်, (2016) ကနျူကလိယ Accumbens အတွက် DeltaFosB ၏တိုးမြှင့်ဖော်ပြမှုနှင့်ဆက်နွယ်နေသည်မဟုတ်
ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း DeltaFosB, FosB နှင့် cFos ၏ Striatal စည်းမျဉ်း (2010)
ကိုကင်းအပေါ် cerebellum: plasticity နှင့် metaplasticity (2015)
အော်ပရေတာသင်ယူမှု (2013) စဉ်အတွင်း corticostriatal ကွန်ရက်မှာ neuroplasticity ၏လက်တွေ့ဆက်စပ်မှု
မော်ဖင်းအကိုက်-မှီခိုကြွက် (2016) တွင် naloxone-သွေးဆောင် conditional ရာအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက်အတွက်နောက်ကျနေခဲ့သည် cortex ၏အခန်းကဏ္ဍကို
မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် striatal ဟန်ချက်ညီလုပ်ရပ်: တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းအလတ်စား spiny အာရုံခံ၏ကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍ (2011)
ကင်းဖို့ Psychomotor တုံ့ပြန်ချက်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ Threonine 149 Phosphorylation Enhancer ΔFosBမှတ်တမ်းလုပ်ဆောင်ချက် (2014)
Tramadol အထီး Wistar ကြွက် (2019) ၏နျူကလိယ accumbens နှင့် prefrontal cortex အတွက်Δ-FosB အတွက်အပြောင်းအလဲμ-opioid အဲဒီ receptor နှင့်ကို p-CREB အဆင့် induces
ထူးခြားတဲ့အပြုအမူနဲ့ C57BL /6ကြွက်တွေက (2016) တွင်သလိုမျိုးကက်ဖိန်းဓာတ်-ရောနှောထားသောအရက်၏ပြန်လုပ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စားသုံးမှုအားဖြင့်သွေးဆောင် Neurochemical အကျိုးသက်ရောက်မှု
မိမိဆန္ဒအလျောက်ဘီးပြေးကြွက်တွေမှာနာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုမှခံနိုင်ရည်အားပေးအားမြှောက်: နျူကလိယဘို့တစ်အခန်းကဏ္ဍ DeltaFosB (2018) accumbens
ဆုတ်ခွာဖြစ်ပေါ်နိုင်နှင့်အီသနော-သွေးဆောင် locomotor ာင်း (2014) မှခံနိုင်ရည်အဖြစ်ခွဲခြား outbred ဆွစ်ဇာလန်ကြွက်တွေမှာ FosB / ΔFosBစကားရပ်၏ကွဲပြားပုံစံများ induces
(L) ကိုစီးပွားပျက်ကပ်အတွင်းမြစ်ဝကျွန်းပေါ်-FosB အနိမျ့, စိတ်ဖိစီးမှု (2010) မှစ. ကြွက်တွေကအကာအကွယ်ပေးတယ်